Iyini futhi yenziwa kanjani i-cyclogenesis yokuqhuma | Isimo Sezulu Senethiwekhi
IsiJalimane Portillo | | Iziphepho
Ebusika obuhlukahlukene siye sahlangabezana neziphepho ezinodlame kakhulu ezidale umonakalo omkhulu ezweni lethu. Abezimo zezulu bamemezele lezi zinhlobo zeziphepho njenge i-cyclogenesis eqhumayo. Kodwa-ke, siyazi ukuthi yini i-cyclogenesis? Ngabe kuncike kuphi uma "kuqhuma"?
Kulesi sihloko ungafunda konke mayelana ne-cyclogenesis. Kumele uqhubeke ufunde 🙂
1 Yini i-cyclogenesis eqhumayo?
2 Kwakhiwa kanjani?
3 Ukubuka konke nokubikezela
4 Ezinye izenzakalo ezifanayo
Yini i-cyclogenesis eqhumayo?
Ukuqonda lo mqondo, okokuqala kufanele sazi ukuthi ziyini iziphepho. Lezi izindawo ezinengcindezi ephansi lapho umoya uzungeza khona ujikeleza ngewashi enyakatho nenkabazwe. Cishe konke ukuqubuka noma ukucindezelwa kudlula kwi-cyclogenesis ngandlela thile ngesikhathi sokwakhiwa nokuthuthuka kwabo. Ezigabeni zabo zokuqala, bakheka ngesakhiwo segagasi esinezinhlelo zangaphambili ezibandayo, ezifudumele nezingaphakathi. Inani eliphansi lengcindezi yasemkhathini liyancipha phakathi nengxenye yokuqala yomjikelezo wayo wempilo.
Ngokuyisisekelo i-cyclogenesis eqhumayo iyi ukwakheka kwesiphepho ngokushesha okukhulu nangamandla amakhulu. Okusho ukuthi, ukwehla kwengcindezi yendawo ngesikhathi esifushane. Lokhu kuphenduka i-squall enobudlova kakhulu emahoreni ambalwa. Igama elijwayelekile elisetshenziselwe lezi zingcindezi ezijula ​​masinyane "liyibhomu" lesimo sezulu.
Ku-cyclogenesis eqhumayo ingcindezi yasemkhathini yehla cishe ngama-24 mb ngaphezulu noma ngaphansi. Imvamisa kwenzeka ebangeni eliphakathi kwama-55 no-60 degrees. Lokhu kungenxa yokuthi izinqubo ze-cyclogenesis zithonywe ukujikeleza komhlaba. Zenzeka kaningi olwandle i-Atlantic ne-Pacific.
Incazelo yokwakhiwa kwe-cyclogenesis yobukhulu obunjalo akulula ukuyiphendula. Kuya ngobubanzi. Ukuze ibhomu lalolu hlobo likhiqizwe, isivunguvungu esihlangana kahle nesinye sezinga eliphakeme kumele sihlangane ngesikhathi esifanele futhi sihambisane. Kumele babe kude ngokwanele ukuze phakathi kwabo kube nokujulisa noma ukukhulisa uhlelo lokudangala ngesikhathi esifushane.
Abantu abaningi bavame ukwenza iphutha le-cyclogenesis yokuqhuma kwesiphepho noma isiphepho. Abahlangene ngalutho nakho. I-cyclogenesis yenzeka kuphela maphakathi nobubanzi futhi ayifani neziphepho ezishisayo. Yize inegama elifanele le-movie, akusona isiphepho esifanele njengoba besho.
ESpain zenzeke kaningana yize kungavamile ezindaweni zethu. Kungabizwa ngokuthi yisiphepho esikhulu ngokuqonda kwakho okusheshayo, ngoba imimoya yayo inamandla kakhulu futhi izivunguvungu zicishe zibe yisiphepho. Isiphepho olwandle sibucayi kakhulu kunesivunguvungu esivamile, ngakho-ke sivame ukudala imiphumela emibi. Igama elithi iziqhumane liyangezwa njengoba lisho ukuthi lijule kakhulu.
Ukubuka konke nokubikezela
Kunokwehluka okuthile phakathi kweziphepho ezithatha inqubo ethile yokujulisa nokuqinisa le nto. Lokhu kungenxa yokuthi lokhu kuqina kuhamba kancane futhi akusheshi kangako. Ku-cyclogenesis yokuqhuma, amandla ezinqubo ezakha wona ashesha kakhulu futhi ayingozi. Kakhulu kangako, ukuthi kuyinto exakile ngesimo sezulu kanye nemiphumela yaso ebusweni.
Ukukhuluma ngesimo sezulu, kuyadingeka ukuthi ngikubize ngokuhlukile ngoba inqubo yokwakheka kwayo nemiphumela yayo kuhlukile. Bahlukaniswe ngale ndlela ukwazisa nokudonsela ukunaka ekuphazamisekeni okubi kakhulu kwe-cyclonic futhi ngezici ezikhethekile.
Ngakho-ke i-squall eqhumayo iyi-subset yama-squall ajulile kakhulu, kepha hhayi enye indlela ezungezile. Ngoba le nto ithatha amahora kuphela ukuthi yenzeke, kunzima kakhulu ukubikezela. Azikho imibandela yokuthi umuntu azi kusengaphambili ukwakheka kwalesi simo.
Ngokuvamile, ama-cyclogenesis aqhuma ezindaweni zasemanzini lapho kungatholakali idatha eningi khona. Akuwona wonke amamodeli angakhombisa izimo kahle. Uma uqala kusukela ekuhlaziyweni kokuqala okuyiphutha noma okungalungile, akunakwenzeka ukubikezela lesi simo. Ngaphezu kwalokho, amamodeli ezinombolo anokuxazululwa okwanele kwendawo kufanele asetshenziswe. Okusho ukuthi, kufanele ivuleke ngokwanele ukuze isebenze ngezinga elikhulu futhi ngasikhathi sinye esifundeni ukuze izenzeko ezincane zikwazi ukwenziwa kabusha.
Amamodeli asebenzayo akwazi ukukhiqiza kabusha i-cyclogenesis kusengaphambili zivame kakhulu. Lapho inqubo yokuqhuma iqhubeka, cishe zonke izinhlobo ziyakukhombisa.
Ezinye izenzakalo ezifanayo
Kunezimo zezulu ezifana ne-cyclogenesis eqhumayo. Enye yazo kwakuyindaba ye Gordon ngo 2006. Bekunemimoya enamandla kakhulu ehlasele iGalicia ne Delta. Kodwa-ke, babengeyona i-cyclogenesis njengoba kucatshangwa. Emkhathini kunezimo eziningi ezikhiqiza imimoya enamandla neziphepho ngezindlela ezahlukahlukene: kusuka ezingeni elincane (iziphepho) kuya ezingeni elikhulu (izivunguvungu neziphepho eziqhumayo). Lo mkhakha obanzi noma uhla lwezimo lunganikeza imimoya emibi kakhulu.
Kulokhu, le mimoya yayikhona isiphepho sesigaba 3 lapho babekude nenhlonhlo. Njengoba isiphepho sisondela ebusweni bomhlaba siya ngokuya siba buthaka. Kuphenduke isiphepho esishisayo kuphela. Lapho engena eGalicia wabanjwa umoya obandayo wesiphepho esibi. Lokho kuyenze yaya enyakatho-ntshonalanga yenhlonhlo ngaphandle kokwenza inqubo efana neyokwakheka kwe-cyclogenesis yokuqhuma nganoma yisiphi isikhathi.
Omunye umcimbi ofanayo ngesikhathi kwenzeka i-tropical cyclone Delta ngo-2005. Umoya onamandla ohambisana nalesi siphepho ube buthakathaka yize indawo inwebile. Lokho wukuthi, yize babenamandla amancane, bashaya ezindaweni eziningi. Kamuva, yathunjwa ukuphazamiseka okwakungasungulwa okwakuyethula phezu kweCanary Islands. Imiphumela yendawo neyama-orographic yenze imimoya yaba namandla kakhulu kwezinye iziqhingi. Akunacala lapho yahlangabezana nenqubo yokuqhuma. Ngalesi sizathu, imimoya cishe yesiphepho noma izivunguvungu ezinamandla ngokweqile zivame ukudideka ne-cyclogenesis eqhumayo.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi sekucacile kakhulu ngezinqubo nemiphumela okubandakanya i-cyclogenesis nokuthi sisiza ukulungisa labo abayididayo. Noma yimiphi imibuzo onayo ngayo, unganqikazi ukuyishiya kumazwana. Ngizokuphendula ngenjabulo 🙂
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Iziphepho » Iyini futhi yakhiwa kanjani i-cyclogenesis eqhumayo
Ungayifunda kanjani futhi uyiqonde imephu yesimo sezulu
Wayengubani u-Alfred Wegener?